Rongedza: Printer Offline In Windows 10
Paanenge achiedza kudhinda dhidhi mukati Windows 10, unogona kuwana printer offline message. Iyo printer inotsvaga mutsara inoratidza kuti printer haifaniri kushamwaridzana nePc kana kuti yakavharwa.
Dzimwe nguva, printer offline offline message inoratidzika kunyange kana printer inoshandiswa uye yakabatanidzwa Windows 10 PC.
Kana iwe uri kuwanawo printer offline offline message, unogona kuedza zvinotevera zvinogadziriswa, mumutemo iwoyo.
Solution 1 ye7
Chengetedza kana iyo printer inoshandiswa
Usati watanga matambudziko chaiwo, edzai kuti mushanduri ari mubvunzo akaiswa. Kana zvisingaiti, tora pikicha uye umirire kuti ive yakagadzirira kushanda.
Solution 2 ye7
Iva nechokwadi chokuti printer yakabatana nePC yako
Zvakare, zvakakosha kuve nechokwadi chokuti printer inosangana nePC yako kuburikidza nekambo kana Wi-Fi. Kana uri kuedza kubatanidza uye shandisa imwe printer kune PC yako pamusoro pe Wi-Fi, tapota tumira kune yedu nzira yekuwedzera imwe printer isina wire Windows 10 PC tungamirai mazano-nhanho.
Solution 3 ye7
Shandisa purogiramu simba rekushandura
Bvisa printer uye uibudise kubva paPC yako. Tangazve PC yako. Mira kwenguva. Pinda mu printer kuPC yako wozoiita zvakare. Tarisa kana iyo printer iri paIndaneti zvino.
Solution 4 ye7
Bvisa uye wedhinda printer in Zvirongwa
Iyi ndiyo yakanakisisa yekushandura nzira ye printer issues in Windows 10. Kazhinji yenguva, kubvisa uye kuwedzerazve printer zvakare kuburikidza neMitemo inogadzirisa nyaya yacho. Heino nzira yekuzviita nayo.
Step 1: Enda kune Settings > mano > MaPrinta & Scanners.
Step 2: Dzvanya paImpinderi yechipinda uye ipapo tora Bvisa mudziyo bhatani kuti ubudise printer kubva paPC yako. Kana iwe ukawana gwaro rekusimbisa, tora Ehe.
Step 3: Iva nechokwadi chokuti printer inoshandiswa uye yakabatana kuPC yako. Enda kune Settings > mano > MaPrinta & Scanners zvakare.
Step 4: Baya Wedzera printer kana scanner chisarudzo. Kamwe Windows 10 anoona printer yako, chengeta Wedzera kifaa bhatani kuisa printer.
Izvi zvinofanira kugadzirisa iyo printer inotsvaga nyaya.
Solution 5 ye7
Dzorerazve Purepa Spooler service
Kana iri sarudzo dziri pamusoro isiri kushanda, kugadzirisa zvakare Printer Spooler ndiyo nzira yakanakisisa. Heino nzira yekuzviita nayo.
Step 1: mhando Services.msc muItanga / taskbar tsvaga yekutsvaga uye wobva warova Enter key kuti uzarure hwindo reMabasa.
Step 2: Tsvaga iyo Printer Spooler basa. Kungofa pairi uye wovhara iyo Dzorerazve chisarudzo chekutangazve wePrint Spooler service.
Solution 6 ye7
Bvisa mutsara wokudhinda
Step 1: Vhura iyo Windows 10 Zvirongwa. Enda kune mano > Printers uye Scanners peji.
Step 2: Dzvanya pikicha yako yekupinda uye wovhara Manage bhatani.
Step 3: Pano, chengeta Vhura mutsara wokudhinda bhatani kuona zvinyorwa zvose mumutsara. Sarudza gwaro, kurudyi pairi uye wovhara iyo kanzura chisarudzo chokubvisa chichibvisa kubva kumugwagwa. Ita izvi kune zvose zvinyorwa zviri mumapepa ekudhinda.
Solution 7 ye7
Runzai Print stresshooter
Windows 10 inopa mazano ekugadzirisa matambudziko kuti aongorore uye agadzire zvinetso zvepiritsa. Enda kune Settings > Kwidziridzo & Chengetedzo > disposal peji kuti uwane Printer dambudziko rekugadzirisa. Runzai dambudziko rinotambudza uye tevera mazano ari pane-skrini kuti ugadzirise mushandisi wekombiyuta isina kukodzera.
Gadzirisa USB kana Wi-Fi printer pa Windows 11
Yakanakisa purinda 2021: Iyo yakanakisa inkjet uye laser maprinta achiri muchitoro online
Sei Kuwedzera Wireless Printer Ku Windows 10 PC
Maitiro ekuti Tambudzika sei Zvakajairika Printer Matambudziko mukati Windows 10
Kugovera mafaira uye makadhinda Windows 10
Printer Kugovera haisi kushanda mukati Windows 11 / 10
Dhinda mutyairi anotambira 32bit maapplication amira kushanda